Nzira yekubatsira vaviri vacho kudzora manzwiro avo | Bezzia
Maitiro ekubatsira vaviri vacho kudzora manzwiro avo
Maria Jose Roldan | 01/07/2021 22:04 | Psychology
Mumwe nemumwe anofanirwa kuve nebasa rekugona kudzora manzwiro avo uye nekuvaratidza manzwiro avanoita. Panyaya yekuve nehukama, iye munhu waunoda anofanira kuve nemano akakwana ekudzora aya manzwiro uye mumwe munhu anogona kungokubatsira iwe kuzviita. Vaviri vanovakirwa kuitira kuti vagadzire chisungo chinofara sezvinobvira.
Kusati kwasvika kwematambudziko, vese vanhu vanofanirwa kutsigirana kuti vaone kuti akasiyana manzwiro anobatsira kuwana humwe hutano kugara mukati mevaviri. Munyaya inotevera tinokuratidza maitiro ekubatsira vaviri vacho kubata uye kudzora akasiyana manzwiro.
Zvekuita kubatsira mumwe wako kubata manzwiro
Unofanirwa kutanga kuratidza kuti mune vaviri, izvo munhu zvaanonzwa zvinogona kupedzisira zvave kukanganisa mumwe munhu. Ndokusaka muchiitiko chekuti mumwe wemapati anonzwa kushushikana, kusava nehanya kana kusuruvara, mumwe wacho anofanirwa kuve akanaka zvakanyanya kuti awane mibairo yakanaka. Nenzira chete iyi ndipo panogona kugadzikana uye kuenzana muhukama. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita kubatsira mumwe wako kubata kwavo manzwiro:
Chinhu chekutanga kuita kuratidza mumwe wako kuti une rudo sei uye kuvaita kuti vanzwe kuti iwe uri rutsigiro rukuru kwaari kana munguva dzakaoma kana dzakaoma kudaro. Kunzwa nguva dzese kuti iwe une mumwe wako padyo, Inokutendera iwe kunongedza zvirinani zvakanyanya manzwiro akasiyana aungave uine uye kuti vasazobuda mukutonga pamwe nezvinhu zvese zvakaipa izvo zvinogona kureva ramangwana rakanaka rehukama.
Izvo zvinofanirwa kujekeswa kuti kuratidza rutsigiro rwese kune iye waanomuda hakuregerere iye kubva pakudzidza kudzora ake ega manzwiro. Mumwe nemumwe anofanirwa kuve nehanya nemanzwiro avo uye kwete kupa masimba aya kune mumwe. Kana imwe yenhengo dzevaviri vacho isina mazita uye yakasuruvara, mumwe wacho haafanire kutambura. Chinhu chete chaunogona kuita kubatsira mumwe wako kukurira kusuwa uku kuitira kuti anzwe zvirinani. Kuratidza rutsigiro rwese runogoneka chinhu chakakosha kana vaviri vacho vachiziva nzira yekushandura hutano hwavo hwepamoyo zviri nani.
Kutaurirana uye kutaurirana kwakakosha uye kwakakosha mune chero hukama. Ndokusaka zvisingambokuvadza kugara pasi uye kubvunza izvo zvaunoda kuti uve nani zvakanyanya pamoyo. Pane dzakawanda nguva, kushomeka kwekutaurirana kunokonzera kusanzwisisana kwakawanda kunowedzera mamiriro acho ezvinhu.
Pakupedzisira, munhu wega wega anofanira kudzidza kudzora uye kubata akasiyana manzwiro. Kana vari vaviri, munhu ane hutano hwepfungwa anofanirwa kuve nemabasa ekutsigira uyo anonzwa kushata. Hapana chikonzero chaunofanira kuita basa racho womutsiva, sezvo iwe pachako uchifanira kuve wakakura zvakakwana kudzora manzwiro ako kana manzwiro. Kana vese nhengo dzevaviri vacho vakaziva kubata zvakanakisa mamiriro epamoyo, hukama huchave hwakadzikama zvakakwana uye kugara zvakanaka kuchakunda chero dambudziko rinogona kubuda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Maitiro ekubatsira vaviri vacho kudzora manzwiro avo
H & M swimwear yausingakwanise kupotsa
9 madema ezhizha madhirezi ezuva nezuva